08 Jan, 2020 - 17:01	 2020-01-08T17:29:18+00:00 2020-01-08T17:29:18+00:00 0 Views
“Vasikana ava vana vemurume wangu asi kubva pashaya murume wangu munaKubvumbi, handisati ndambowana zororo nevana ivava. Vanouya vachinditukirira, handizive kuti imhosva here kuti murume wangu akashaya.
Anoenderera mberi achiti, “Vanhu vanotove nedzimba nemhuri dzavo asi vanouya kuzondishungurudzira pamba pangu. Vanonditi imba haisi yangu saka ndinofanira kubva asi imba iyi takaitenga nemurume wangu, kunyangwe hazvo iri muzita remurume.
“Amai ava vari kuvanza chokwadi, handivatuke ini. Ivo vanotirambidzirei kusvika pamba pababa vedu? Kurwara kwese kwaiita baba ndini ndakavachengeta, ivo vakavasiya vachiti isu tiite zvababa vedu nekuti vaiti varambana. Baba chaivo vakatoti imba haisi yamhamha vane sitendi yavakatopihwa,” anodaro.
Perpertual anotiwo, “Handinetsane navo ini. Hapana hangu chandingade kumba ikoko, handina ndava navo.”